Semalt - iyo World Renown Dhijitari Agency
Semalt inzvimbo inozivikanwa pasi rose yedhijitari iyo inoshandira muKutsvaga injini Optimization uye Webhusaiti Yekuongorora. Kubva panguva yaunodzvanya pawebhusaiti yavo, zviri pachena kuti ivo vane nzwisiso yakadzama yekukwezva vatariri vepamhepo nezvavo zvakanyatsorongedzwa zvemukati, kutungamira mafoni kune zviito, uye kushandisa kwechivara runako. Neboka revashandi vakakwaniriswa avo vane ruzivo mumitauro yakawanda, zviri nyore kuona kuti sei Semalt aine mazana ekuongororwa kwakanaka uye mhedzisiro kubva pasi rese. Oo, uye haugone kukanganwa kutaura kuti hi kuna Turbo Turtle!
Tisati tasvetukira mumapaketi avo, ngatidimburei zvese zvavanoita.
Yekutsva Injini Yekutsikisa (inozivikanwawo seSEO) iri kuwedzera nekushomeka traffic yakatungamirwa kuwebhusaiti yako nekuwedzera kuoneka kwe peji rako pane Injini yekutsvaga. Kuti uoneke mumushandisi weKutsvaga Injini Yekutsvaga, peji rako rinoda kuverengerwa. Indexing ndiyo maitiro eChinjini chekutsvaga chinotora ruzivo neSpider (inozivikanwawo seBot kana Crawler) saka inogona kuronga zvirimo zvekupesana nechinhu chese chinhu chiri munhoroondo yayo. Kuti Spider uwane peji rako, ivo vachazofanira kutsvaga yako link ipo ichitsvaga imwe webhusaiti. Ichi kuwanikwa kunonzi Kudzosera kumashure.
Kamwe Spider yawana peji rako, inounganidza yega yeji yeruzivo iyo yainogona kuwana kusvikira iyo Yakafuridzirwa kure kune yako saiti. Iyo Injini yekutsvaga inozopa izvo zvirimo zvehuwakakosha muvhi, izvo zvinogona kubatsira kana kukuvadza yako SERP (Mhando yekutsvaga Mapeji Mapeji) kuiswa. Kana Injini Yekutsvagisa peji rako, ichatonga zvinhu zvinotevera:
Mutauro Wemukati: Mushandisi anogona kuverenga zvirimo here?
Kuenderana Kwemukati: Ko zvemukati zviripo here pane yekutsvaga nguva?
Chinyorwa Chemuviri: Zvemukati zvako zvinowirirana papi neyaka tsvaga
Peji Musoro: Ndeipi nzvimbo inotarisana nechinyorwa chako?
Mifananidzo uye Graphics: Ko izvo zvinoonekwa zvinotsigira zvemukati wako?
Nzvimbo: Yako nzvimbo yenzvimbo inotsamira?
Nezvese zvako zve SEO zvakagadzirirwa mushe, unofanirwa kunge uine rwizi rwakasimba rwevangangoita vatengi vachirovera kuburikidza newebhusaiti. Asi unogona sei kutaura nekusingaperi kuti webhusaiti yako iri kusvika kune avo vateereri vanowona? Kwete izvozvo chete, asi ungaziva sei kana vateereri vako vari kuita nenzira yaunoda kuti vaite? Chokwadi, isu tinogona kugara takatarisa yako yekutengesa mushumo uye kutonga kunze kweizvozvo. Asi zvese chirevo chekutengesa zvinokuudza iwe kuti imarii iwe yaunoita. Kana iwe uchida kunyatsonzwisisa kuti mutengi ari kuita sei kune webhusaiti yako, iwe uchafanirwa kuchera wakadzika muWebhu Analytics chirongwa.
Web Analytics inoshandiswa kuyera, kuunganidza, uye kuongorora mishumo nechido chekunzwisisa maitiro evateereri vako kuti iwe ugone kuita saiti yako webhusaiti. Aya mapurogiramu anokupa ruzivo rwakakosha pazvinhu zvinotevera.
Huwandu Hwese hweVakasiyana Vanoshanya
Nhamba Yese Yekudzokorora Kushanya
Iroro ruzivo rwakawanda kuti utarise kuburikidza! Asi zvakakosha kuti iwe uve neizvi sezvo zvichizokubatsira iwe kukwidziridza yako kuvapo kwewebhu kuzere. Newebhu Webtics, iwe unogona kuita sarudzo chaiyo pane zvinotevera:
Sarudza kuti ndeapi mazwi makuru ari kutyaira traffic kune yako saiti.
Sarudza kuti ndechipi chigadzirwa chiri kuunganidza kutarisisa.
Alter mitengo yakadzika kubva pakusangana kwevatengi.
Spot mikana yekuvandudza.
Gadzira zvemukati zvakanangana nekwaunoda.
Kunyange zvichikwanisika kuita zvese izvi iwe pachako, zvinotora nguva kuti iwe uve wakakwana bhizinesi rako. Sezvakangoita muhupenyu chaihwo, iwe uchagara uchikwezva vatengi vewindo kupfuura zvaungaita chaizvo vatengi. Saka iwe unofanirwa kuisa yako yakanyanya kunaka kusimba kuti ugone kukwevera mukati mevanhu vazhinji sezvinobvira. Uye ndosaka iwe uchifanira kuroja Semalt!
Kana iwe ukatarisa pamapeji avo ezviitiko, ivo vakabatsira mazana emakambani pasi rese kuwana mabhatani-kuburikidza nenhamba dzinodiwa kuti uwane purofiti. Mhosva imwe neimwe ine chinongedzo chinopinda mune zvinotevera:
Asati uye Mushure MeMetric Sheets
Sezvauri kuona mu clip ini yandakapa pamusoro, Semalt yakawedzera makambani aya pamwedzi mushanyi kuverenga kubva kune vashandisi 114 kusvika kune 1,771 vashandisi! Ndiyo kagumi nekashanu nhamba yevashandisi yavaimbova nayo! Izvi ndizvo zvakataurwa nemutengi pamusoro pemhedzisiro yavo:
Uye kana iyo ongororo dzakanyorwa uye nhamba dzakaoma dzisina kukwana, Semalt anewo peji yakatsaurirwa kuongororwa kwevhidhiyo. Ongororo idzi dzakauya kubva kune vatengi vakagutsikana pasi rese!
Saka Semalt angakupa sei iwe mhedzisiro? Chinhu chekutanga chaungaita kutora mukana wavo wekuyedzwa izvo Yavuz kubva kuvhiyiwatr.com zvavakaita. Paunenge uchangobva kudzvanya paSemalt.com, iwe unowana bara ino ongorora iwe webhusaiti yako. Kuti uone chirevo ichi, zvese zvaunofanirwa kuita kugadzira account. Uyu mushumo uchapfupisa zvawawana pane peji rako rewebhu uye unokurudzira pasuru inogona kubatsira kuwedzera izvi zvabuda. Iwo mapakeji anosanganisira AutoSEO , FullSEO , uye Analytics.
AutoSEO inokupa zvinotevera zvishandiso:
Webhusaiti Kuoneka Kuvandudza
Webhu Yekuongorora Wewebhu
Aya ndiwo matanho ekuvaka anodikanwa kutanga chirongwa chakabudirira cheSEO! Kunyangwe iwe uchidzidza SEO paunenge uchienda, zvishandiso zvinowanikwa kwauri muAlex SEO package zviri nyore kushandisa kune yako webhusaiti. Iyi ndiyo inodhura zvakanyanya, inokurumidza, uye inobudirira purogiramu Semalt inopa.
Unogona kutenga mazuva gumi nematatu emasenti 99. Mushure meizvozvo, unogona kutenga mwedzi wega mabhuru emitengo inotevera:
1 mwedzi pamadhora mazana mapfumbamwe
Mwedzi mitatu madhora makumi maviri nematatu
Mwedzi 6 madhora makumi mashanu
1 gore pamadhora 891
Iyo FullSEO package ine imwe ye Semalt inyanzvi yekuita inoita zvinotevera:
Webhusaiti Kukanganisa Kugadzirisa
Nechirongwa ichi, chinangwa chaSemalt ndechekusundira webhusaiti yako kumusoro kweSERPs. Imwe yehunyanzvi hwavo hwakakwaniswa inopihwa peji rako kuti vakwanise kushandisa zvese zviwanikwa zviripo kuti vaite kuti peji rako riwedzere kubudirira. Sezvo iwe zvawaona pamusoro nekuvhiyiwatr.com, ivo vanogona kusvetukira mukati chairo peji uye kutanga kushanda mashura avo ipapo.
Uye kungoti kana iwe uchida kuziva zvishoma pamusoro pevashandi vavo, iwe unogona kuwana yavo mifananidzo pese pawebhusaiti. Semuenzaniso, Yana Shafarenko (SEO Nyanzvi) naNatalia Khachaturyan (Yemukati Strategist) vanoratidzwa se “chenjerai zvigaro zvako” pane yekutanga peji rewebhu raSemalt. Pazasi pawo pane rondedzero yezvavakakwanisa kuita vachiri kushandira Semalt.
Vanoverengeka avo nyanzvi dziri kunyorawo zvinyorwa zveSemalt blog. Vladislav Polikevych (Copywriter), Olga Pyrozhenko (Marketing Manager), uye Eugene Serbin (Musoro weSEO) vanyora zvinyorwa zvinoverengeka pane zvazvino SEO maitiro uye kutora mukana wemusika wako. Uye ini ndakataura kuti ivo vane makumi maviri nemaviri emapeji eblog zvinyorwa? Nezvinyorwa zvishanu pane imwe neimwe peji uye zvinyorwa zviviri pane yekupedzisira, izvo izere zvezvinyorwa zve127 (senge izvozvi) zviripo ZVEMAHARA! Pakati pehupupuri hwavo hwevatengi uye zvinyorwa zvavari kupa zvakasununguka mu blog yavo, iwe une zvakawanda zviwanikwa zvaunogona kuratidza usati waita sarudzo yekutenga Semalt Yakazara SEO package.
Iyo yakazara SEO package inosiyana pakati pevatengi, saka, zvinosuruvarisa, ini handikwanise kukupa iwe zvakananga mutengo. Asi sekureva ini ndambotaura pamusoro apa, iyo inosimudza huwandu hwekutarisa kwakanaka uye yekubudirira mishandirapamwe inotaura nekukosha kwakadii kwaSemalt's Full SEO package Ivo zvakare vanopa discounts kana iwe kusaina kunyoresa pamwedzi:
Mwedzi mitatu inopa 10% kubvisa
Mwedzi mitanhatu inopa 15% kubviswa
Mwedzi gumi nembiri inopa 25% kubviswa
Uye kwekupedzisira, kune Semalt's Web Analytics package, inosanganisira masevhisi anotevera:
Webhusaiti mamiriro ekutarisa
Vhura webhusaiti kuoneka
Ongorora mawebhusaiti ari kukwikwidza
Ziva mapeji epa-optimization mikana
Iri ndiro bheji rinokuudza kana rako rese basa riri kukuendesa kunobudirira kana kuburitsa pachena iwe uine rakawanda basa rekuita. Pasina ruzivo urwu, haugone kukonzeresa webhusaiti yako pamusoro peSERPs, kana kugara kumusoro kana watove ipapo. Kuziva isimba. Uye nesimba iro, unogona kuita zvimwe zvinotevera:
Wongorora makwikwi ako kuti uone zvavari kuita
Enzanisa yako keyword research nezviri kuitika parizvino
Tsvaga mikana mukati mewebsite yako webhusaiti
Panyaya yemitengo, ivo vanopa mapakeji ayo ane keyword uye package muganho. Vanotaridzika seizvi:
$ 69 / mwedzi kwemazana matatu emakiyi, mapurojekiti matatu, uye mwedzi mitatu yenhoroondo yenzvimbo
$ 99 / mwedzi yegumi nemazana emashoko akakosha, gumi nemapurojekiti, uye 1 gore renhoroondo
$ 249 / mwedzi yegumi nemazana emakiyi, mapurojekiti asina muganho, uye nhoroondo isina chinzvimbo
Kana ukasaina kwemwedzi yakawanda, unogona kuchengetedza zvinotevera:
Pakati pezviongororwa zvese zvakanaka izvo Semalt anozvishingisa kuratidzira pane webhusaiti yavo, mablogiki uye mukurumbira ndezve avo vakakwaniswa-akawanda mitauro yehunyanzvi, uye nemitengo yavo inodhura, zviri nyore kuona kuti sei Semalt iri imwe yeakanakisa madhijitari pasi pano. Sezvo uchingobhurawuza webhusaiti yavo, iwe unogona kuona kuti ivo vane hanya zvechokwadi nezvavari kuita kune iyo SEO uye Analytics